Sane oo Taleefoon kula hadlay xubin muhiim ka ah qolka labiska Kooxda Bayern Munich | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka Ciyaaraha HNN Sane oo Taleefoon kula hadlay xubin muhiim ka ah qolka labiska Kooxda...
Baladweyne(HNN)- Laacibka garabka kaga ciyaara Manchester City ee Leroy Sane ayaa qadka taleefanka kula hadlay muddo 30 daqiiqo ah macallinka Bayern Munich ee Hansi Flick sida lagu helayo wararka ka imaanaya dalka Jarmalk.
Waxaa xusid mudan in Sane uu bartilmaameedka koowaad u ahaa kooxda ka ciyaarta Bundesliga tan iyo xagaagii hore, balse dhaawac daran oo jilibka ka soo gaaray ayuu garoommada kaga maqnaa tan iyo kulankii Community Shield ee bishii August, taasoo soo gaabisay rajadii u wareegistiisa Allianz Arena.
Laacibka heerka caalami ee qaranka Germany ayaa hadda taam ah, balse Bayern ayaa yeelatay macallin aan ahayn midkii soo billaabay xiisihiisa, maadaama Flick uu shaqada kala wareegay Niko Kovac.
Si kastaba ha ahaatee Flick qudhiisa ayaa lagu soo warramayaa inuu wicitaan 30-daqiiqo qaatay ay isku fahmeen isaga iyo laacibka Man City sida laga soo xiganayo SportBild.
Waxaa akhbaarta intaas ay ku dareysaa in gabi ahaan ay labada dhinac meesha ka saarnaa shakigii la saxiixashadiisa.
Wakiilka Sane ayaa horraan jariiradda Bild u sheegay in Bayern ay tahay kooxda kaliya ee uu laacibkan ku biiri doono haddii uu City ka dhaqaaqayo.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo xaqiijisay kiisas hor leh oo ku cudurka karoona
Next articleBarcelona oo go’aan lama filaan ah ka gaartay mustaqbalka Philippe Coutinho